Olan’ny delestazy : Nandray fanapahan-kevitra ny filohampirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaOlan’ny delestazy : Nandray fanapahan-kevitra ny filohampirenena
20/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandraisan’ny filohampirenena fanapahan-kevitra ireo mpitantana tsy nahomby tao anivon’ny Jirama. Iza tokoa no tsy vaky vava manoloana ny tsy fahaizan’izy ireo mamaha ny olan’ny delestazy. Noesorina voalohany tamin’izany ny tale jeneralin’ny Jirama Nestor Razafindroriaka. Manaraka azy tao ny filohan’ny filankevi-pitantanana Rachid Mohamed. Ny filankevitry ny minisitra, omaly, no nankatoa an’izany didim-panjakana izany.
Lasa Administrateur Délégué kosa no hitantana ny Jirama vonjimaika manomboka eto. Lantoniaina Rasoloelison no voatendry amin’io toerana io. Efa minisitry ny Vola sy ny Tetibola faramparany tamin’ny andron’ny Tetezamita ny tenany. Efa filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Sonapar ihany koa.
Asa lehibe miandry ity Administrateur Délégué ity ny fanarenana haingana ny Jirama, eo anatrehan’izao fahavoazana lehibe mahazo azy izao. Araka ny lalàna dia manana telo volana izy hanatontosany ny andraikitra rehefa nankinina taminy.
Nivoaka tamin’ny filankevitry ny Minisitra omaly koa ny anaran’ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Filankevi-pitantanana. Miisa 12 izy ireo. Ireto avy izany anarana izany :
-Befeno Todimanana Hyacinthe solontena avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika
-Ranivoarisoa Herilala solontena avy amin’ny Primatiora
-Feno Pierre Jean, solontena avy amin’ny ministeran’ny Vola sy ny tetibola
-Raseliarison Mamiarivo Julien, ministeran’ny Rano
-Razanakoto Norbert, ministeran’ny Angovo sy ny Solika
-Lemanarina Jean Chistophe, ministeran’ny Toekarena
-Rasamoel Jean Jacques Nambinina, ministeran’ny Varotra
-Rafidy Onisoa Josielle, ministeran’ny Indostria
-Rajoera Fredy, misolontena ny sehatra tsy miankina
-Haja Maminirina misolontena ny Mpiasa
-Andriambolonosy Robinson Jean Douglas, misolontena ny Mpiasa
-Eric Randrasana, noho ny fahaiza-manaony manokana.
Efa porofo mivaingana tamin’ny tsy fahombiazana nataon’ireo ekipa teo aloha io fatapahan-jiro lavareny nanerana ny Nosy io. Manginy fotsiny ny fanaovana “serasera” milina avy ao amin’ny Jirama farany teo. Ny lehibe indrindra amin’izany ilay filazana fa afaka 4 andro dia ho tapaka ny rano. Ny ampitson’iny anefa, dia nodisoin’ny avy ao amin’ny Jirama ihany ilay fampitam-baovao. Antenaina kosa fa hitondra rivo-baovao eo amin’ny fanarenana haingana ny Jirama ireto ekipa vaovao ireto.
Madagasikara/Swaziland : Manga ny lanitra !
Tamin’ny fomba makotrokotroka tokoa no nandraisan’ny mpanjaka Mswati III ny filoha Hery Rajaonarimampianina tany Swaziland, nanomboka teny amin’ny seranam-piaramanidina sy nandritra ny fe-potoana nanatanterahana ny Fihaonamben’ny SADC. Misy hitovitovizany ny tany roa tonta dia ny ...Tohiny